Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 3
Tao anaty taratasy iray vao haingana, ny namana iray nanontany hoe: Nahoana no tsara kokoa ny fanasitranana ny vatana taorian'ny nahafatesany fa tsy nandevina azy?
Betsaka ny antony mandroso amin'ny fananganana ny fandevenana olona. Anisan'ireny fa ny cremation dia madio kokoa, madio, tsy mila efitrano kely, ary tsy manisy aretina, toy ny matetika avy amin'ny fasana, any amin'ireo velona. Fa ny tena lehibe indrindra dia ny fandrosoan'ny Theosophists, izany hoe ny fahafatesana dia ny fandavana ny fitsipika ambony kokoa, ary midika hoe mamela ny vatana ho trano foana. Rehefa avy nandona ny sisa tavela ny fanahy ny olona, ​​dia tavela ny vatana astral, izay nanome sy namorona ny endriny ara-batana, sy ny faniriana. Ny vatana astral na forme dia mijanona manodidina, ary maharitra mandritra ny fanjavonan'ny vatana ara-batana. Ny vatana faniriana kosa, dia hery mavitrika manimba zavatra araka ny fatiantoka satria masiaka na tsy misy dikany ny faniriana mandritra ny fiainana. Io vatana faniriana io dia mety haharitra an-jatony taona raha maharitra ny faniriana ao anatiny, fa ny vatana ara-batana kosa dia maharitra taona vitsivitsy. Ny vatam-paniriana io dia vava iray izay manintona ny tanjany, voalohany amin'ny sisa sy faharoa avy amin'ny zavamananaina izay hanome azy ireo, na hanaiky ny fisian'izy ireo. Ny vatan'ny faniriana dia misintona sakafo avy amin'ny endrika maty sy amin'ny vatana astral, fa raha ny vatan'ny vatana dia novonoina izay manalavitra ireo rehetra teo aloha. Izay manimba ny herin'ny vatana ara-batana, manala ny vatany astral, mamaha izany ao amin'ireo singa izay nalaina azy talohan'ny nahaterahany sy fony mbola miaina an'izao tontolo izao, ary mamela ny saina hampiely azy mora kokoa amin'ny faniriana vatana ary hidirany ao anaty fitsaharana izay antsoin'ny mpitondra fivavahana ho lanitra. Tsy afaka manao fanompoana lehibe kokoa ho an'ireo tiantsika isika ary efa nandalo tamin'ity fiainana ity fa tsy natao ny fandevenana ny vatan'izy ireo ary noho izany dia hanamaivana azy ireo ny filàna anaty fofonaina sy ny horohoron-tany.
Miaina amin'ny vanimpotoana ara-tsiansa loatra isika izao mba hamelana hisy fahamarinana ao amin'ny talen'ny fampianaram-baovao amin'ny haino aman-jery toy ny vampira. Saingy, na izany aza, dia mbola misy ihany ny fahamarinana, ary maro ny lehilahy siantifika, izay nandia ny taonan'ny finoanoam-poana, dia nanjary nino ny finoanoam-poana kokoa noho ny tena tsy nanan-talenta rehefa niaina traikefa tamin'ny vampira izy ireo; avy eo ny anjarany mba hiaina fanesoana sy jibes ny mpahay siansa namany. Ny iray amin'ireo tombony amin'ny tsy fahombiazan'ny lozisialy be loatra momba ny fiainana an-tany sy ny fiainana an'izao tontolo izao, dia ny fanesorana ilay eritreritra malaza hialana amin'ny lazan'ny goblins, ny ghouls ary ny vampira, amin'ny fanesoana ny zavatra toy izany. Noho izany dia tsy dia misy vampirazy noho ny Moyen Orient rehefa nino ny mpamosavy sy ny ody ratsy. Ny Vampires dia mbola misy ary mbola hitohy ary hiaina hatrany raha mbola miaina ny fiainana eto an-tany, ny olona ataon'izy ireo eritreritra sy faniriana mamono ny fahavalony, manambaka ny mahantra sy tsy afa-manoatra, manimba ny fiainan'ny namany, ary mamono olona hafa ho an'ny filana feno fitiavan-tena sy tsara indrindra ananany. Rehefa ny olona manana faniriana matanjaka sy hery ara-tsaina miaraka amin'ny feon'ny fieritreretana kely na manintona, miaina ny fiainana feno fitiavan-tena, tsy misy fangorahana ny hafa rehefa miahiahy ny faniriany, maka tombony rehetra azo atao amin'ny raharaham-barotra, tsy miraharaha ny fisainana ara-pitondrantena, ary ny olom-panahy ho an'ny hafa ny faniriany amin'ny fomba rehetra izay ho hitan'ny sainy: avy eo rehefa tonga ny fotoana hahafatesan'ny olona toy izany dia natsangana taorian'ny fahafatesana izay antsoina hoe vatana faniriana, hery sy hery manjavozavo. Tena miavaka amin'ny endrika astral izay mivily manodidina ny sisan-batana. Ny vatana faniriana toy izany dia matanjaka noho ny an'ny olona antonony ary mahery vaika, satria ireo hevitra nandritra ny fiainana dia nifantoka tamin'ny faniriana. Ny vatam-paniriana io dia mpanamory vinavina amin'izany ka mandany ny olona rehetra hanokatra varavarana amin'ny fiainana, ny eritreritra, ary ny faniriana ary izay malemy tanteraka dia hamela ny vampira handresy ny heviny ara-moraly. Ny tantara mahatsiravina azo tantaraina momba ny zavatra niainan'ny maro izay tratra ny vampira iray. Ny vatan'ireo olona izay niaina ny fiainan'ny vampira dia matetika ho hita vaovao, intact, ary ny nofo dia ho mafana kokoa taona taorian'ny nahaterahany. Midika fotsiny izany fa ny vatana faniriana dia matanjaka indraindray mba hifandraisany amin'ny ara-batana amin'ny alàlan'ny vatana astral, ary hitazona ny endriny ara-batana, amin'ny alàlan'ny fiainana izay manome aina avy amin'ny vatan'olombelona velona amin'ny vampire na faniriana vatana. Ny fandoroana ny vatana amin'ny cremation dia mihena amin'ny mety hisian'ny vampire olombelona miaro ny vatany amin'ny zavamananaina avy amin'ny velona. Ny vatan'olombelona, ​​toa ny tranobain-trano na trano fitahirizana aza dia rava ary ny vatana faniriana dia tsy afaka mitondra avy hatrany ny ain'ny olona ary voasakana tsy ho tonga hifandray aminy.
Rehefa tonga eo amin'ny fiainana ny fanahy dia manana lesona voafaritra tsara hianarana izany, amin'ny fianarana izay mety hitranga raha maniry izany. Ny fotoana izay ianarana ny lesona iray manokana, dia mety ho taona vitsivitsy na hitarina mihoatra ny zato, na tsy azo ianarana mihitsy ny lesona; ary miverina an-tsekoly miverimberina hatrany ny fanahy mandra-pahitan'ny lesona izany. Mety hianatra bebe kokoa ao anatin'ny dimy amby roapolo taona ny olona iray izay mety hianatra amin'ny zato. Ny fiainana eto amin'izao tontolo izao dia natao hahazoana fahalalana lalina momba ny fahamarinana mandrakizay. Ny aina tsirairay dia tokony hampiroborobo ny fanahy iray ho akaiky kokoa ny fahalalana an-tena. Ny antsoina hoe lozam-pifamoivoizana dia ny fampiharana amin'ny antsipirian'ny lalàna ankapobeny. Ny loza na ny zava-mitranga dia hany andiany kely iray amin'ny tsingerin'ny hetsika. Ny loza fantatra na hita, dia ny fitohizan'ny sy fanatanterahana ny antony tsy hita maso ihany. Hafahafa toa azy io, ny loza ateraky ny eritreritra izay ateraky ny olona iray. Ny eritreritra, ny hetsika ary ny lozam-pifamoivoizana dia tanteraka ny tsingerin'ny antony sy ny vokany. Io ampahany amin'ny tsingerin'ny antony sy fiantraikany mampifandray io dia misy fihetsika izay mety hita na tsy hita; ary ny ampahany amin'ny tsingerin'ny antony sy ny fiantraikany izay vokatr'izany sy ny vokatry ny antony, dia ny loza na nitranga. Ny loza tsirairay dia azo zahana amin'ny antony mahatonga azy. Raha mahita ny antony haingana eo amin'ny lozam-pifamoivoizana fotsiny ianao dia midika fotsiny fa novokarina vao haingana ny antony, izay midika fa io fihodinana kely io fotsiny ny fisainana, fihetsika ary fiantraikany, izay vao haingana; fa rehefa mitoka-monina ny lozam-pifamoivoizana na ny vokatr'iny ary tsy afaka mahita eo noho eo ny antony iray, dia midika fotsiny izany fa tsy tsingerin'olom-bidy kely ny tsingerin'ny fisainana, ary vao haingana, fa nitombo ho tsingerina lehibe kokoa, eritreritra sy hetsika izay mety ho hita eo amin'ny fiainana talohan'izay na teo aloha.
Ity fanontaniana ity dia toa manontany amin'ny fiheverana fa tsy misy ny vatan'ny astral, toy ny hoe misy io dia afaka mamerina izay mety ho vatana ara-batana rehefa very, indrindra fa ny filazan'ny Theosofista rehetra fa ny zavatra ara-batana dia miorina ao anaty vatan'olombelona. ho an'ny famolavolana vatana anatiny na astral. Fa ny fanazavana azo dia tena tsotra. Tsy maintsy misy ny fizotra ara-batana izay ivaahan'ny zavatra ara-batana ho zavatra hafa ara-batana ary tsy maintsy misy vatana ihany koa ho an'ny planeta tsirairay izay iasany. Ny fitsaboana ara-batana dia ny ra, izay ovaina ny sakafo hanina ho vatana. Ny linga sharira dia molekiola ao anaty rafitra, fa ny vatana ara-batana dia ahitana taova sela. Ankehitriny na dia tsy tapaka fehezina matetika ny sandrin'ny astraly rehefa miangona ny mpikambana ara-batana, tsy misy ny fizarana ara-batana ahafahana mifandray sy mifototra amin'ny zavatra ara-batana. Noho izany, na dia misy aza ny sandan'ny astral, dia tsy afaka mampita ilay zavatra ara-batana ao anatiny satria tsy misy fitaovana ara-batana handefasana ilay resaka ara-batana. Noho izany ny mpifanolo-bodirindrina amin'ny sela mivalona amin'ny sela ara-batana izay namboarina dia tsy manam-pahefana hananganana zavatra ara-batana ho azy. Ny tsara indrindra azo atao dia ny fananganana taova vaovao eo amin'ny faran'ny tendrony ary avy eo hanampina ny fery. Izany koa dia hanazava ny fomba fanasitranana ny ratra, ary ny antony hijanonan'ny ratra lalina raha tsy nangonina nanakaiky azy ny nofo mba hampidirina amin'ny tavy.